ogwe aka na-ewepụta ihe ọhụrụ 7 nanometer ibe naanị maka smartphones dị elu | Akụkọ akụrụngwa
ogwe aka na-enye ihe ọhụụ 7 nanometer ọhụrụ naanị maka smartphones dị elu
Ihe ngosi ohuru a haziri ogwe aka emeela ka anyị nwee akụkọ na-atọ ụtọ, n'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ ekpebiela na oge eruola imelite akara ụlọ ọrụ ya, na-ahapụ aha ahụ anyị niile maara mgbe niile na-egosi nnukwu akwụkwọ ozi iji gaa na ọtụtụ logo ndị ọzọ nke oge a ma emelitere n'oge. N'aka nke ọzọ, ma eleghị anya akụkụ kachasị adọrọ mmasị na ngosi niile, ọ dịkarịa ala mgbawa ọhụụ atọ arụpụtara na 7 nm na nkwa elu arụmọrụ.
Dị ka aha nke ntinye a na-ekwu, ozugbo ha kụrụ n'ahịa, dị ka a na-ahụ anya, ha ga-eme ya na ọgbọ ọhụrụ nke smartphones dị elu nke ahụ ga-abịa. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, na ndị nhazi ọhụrụ a, site na ogwe aka, e meela ya nkwa na ọ ga-enye arụmọrụ nwere ike karịa ọtụtụ ndị nrụpụta ndị dị n'ahịa taa yana na, n'oge ahụ, emepụtara iji rụọ ọrụ na laptọọpụ. Yabụ, ogwe aka na-ekwe anyị nkwa a processor maka smart phones ike outperforming laptọọpụ.
1 ogwe aka na-enye n'oge ogbako ikpeazụ ya Cortex-A76 CPUs, Mali-G76 GPUs na Mali-V76 vidiyo processor
1.1 ogwe aka CPU Cortex-A76
ogwe aka na-enye n'oge ogbako ikpeazụ ya Cortex-A76 CPUs, Mali-G76 GPUs na Mali-V76 vidiyo processor
ogwe aka CPU Cortex-A76
Na nlele mbu nke a nwere ike iyi ihe ohuru na-enweghị oke ihe ebe ọ bụ na, site na nomenclature ọ nwere ike iduga anyị n'ọgba aghara, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na, n'oge a, obere ihe na-erughị otu afọ gara aga, e gosipụtara Cortex-A75 n'ime ọha mmadụ. Na teknuzu larịị, ọdịiche dị n'etiti ụdị ọhụrụ a na nke gara aga dị ọtụtụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na Cortex-A76 gosipụtara arụmọrụ microarchitecture dị eluNa ndị ọzọ okwu, anyị na-ekwu okwu banyere a kpam kpam ọhụrụ processor na e mere na-arụpụtara kpamkpam site ọkọ site ụlọ ọrụ.
N'oge a, ekwesịrị m ikwupụta na na ogwe aka ha anọwo 'dị njikere'Banyere ngosi ya ebe ọ bụ na, tụlee Cortex-A76 a na nke gara aga ozugbo, ihe na n'ikpeazụ yana dịka ị pụrụ ịhụ na eserese na akara ndị a ma ọ bụrụ na ha emeela, ha webatara Cortex na ya -73. Banyere nke a, Cortex-A76 nwere ike inye ihe ruru 200% karịa mgbe, jiri ya tụnyere Cortex-A75, arụmọrụ ahụ na-eto site na 35% na ike oriri na-ebelata site 40%Ihe osise, dị ka ị pụrụ ịhụ, na-adọrọ mmasị, karịsịa nghọta na a ga-eji ihe nhazi a na ngwaọrụ mkpanaka.
Ogwe aka enyewo Cortex-A76 ihe pụrụ iche pụrụ iche nke mere na n'ime ya ị nwere ike na-agba otu isi na zuru ọsọ mgbe ebighị ebi. Nke a pụtara na anyị nwere ike mechaa nwee arụmọrụ na-agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ na-achọ oke arụmọrụ. Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ na onye nhazi a na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na teknụzụ DynamIQ, nke na-enye ohere iji obere Cortex-A55 mee ihe n'ime ụyọkọ CPUs dị iche iche, sistemụ na-enye ezigbo ọrụ maka SoCs dị ọnụ ala.
Dika anyi kwuru na mbido akwukwo a, ihe ozo ndi ozo bu Mali-G76 GPU, ihe nlere nke, dika ihe edeputara, na-aga n'ihu itukwu na bifrost ije nke G52 na G72 jiri mana nke, maka oge a, emeela ka ikwe ka arụmọrụ 1 dị elu karịa. N'ihi iji 5 nanometers mee ihe, Mali-G7 na-enye a 30% Mbelata oriri ike, ihe kwesịrị ịsụgharị na ngwaọrụ nwere nnwere onwe ka ukwuu n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na, n'ihi arụmọrụ, egwuregwu nwere ike ịka mma karịa nke eserese eserese na ike.
Ezigbo ebumnuche nke ogwe aka nwere mmalite nke GPU ọhụrụ a bụ iji nweta, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ na nke ahụ bụ otú ha si gosipụta ya, na a ọtụtụ ibu iche nke ọnụ nwere ike na-agba ọsọ elu-ọgwụgwụ egwuregwu nke, dịka ị maara nke ọma, nwere ọtụtụ ihe dị elu n'ihe gbasara oriri na-edozi ahụ yana CPU. Isi ihe ọzọ na-atọ ụtọ maka ịnabata mgbawa a site na ndị nrụpụta bụ na ekele maka ya, ha nwere ike ịgba ọsọ na ọdụ ha ngwa nke jikọtara ọrụ arụmọrụ ma ọ bụ nke mebere n'ezie.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ anyị ga-ekwu banyere ya Mali-V76 VPU, ihe nhazi vidiyo ohuru nke puru iche site na ogwe aka ndi ozo maka itinye koodu ohuru ohuru nwere ike ichota otu ihe ngosi 8K 60fps UHD n'otu oge ma ọ bụ, nke a bụ otu esi ekwuwapụta ya, ruo iyi 4K anọ na 60fps n'otu oge.
Iji mee nke a, gwa gị na Mali-V76 ọhụrụ ahụ nwere ike ịbawanye okpukpu abụọ maka arụmọrụ nke ikike nke Mali-V61 na-eweta, ịbụ, na mgbakwunye, nwere ike tinye vidiyo na 8K na 30fps. Na ileba anya mbu, eziokwu bụ na arụmọrụ a nwere ike ịbụ, ma ọ dịkarịa ala, oke, ọ bụ ezie na ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu ma ọ bụrụ na, dị ka ọ dị, ndị nrụpụta na-amalite iji ihe nhazi a na televishọn na okpu agha maka eziokwu dị adị na eziokwu dị elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Technology » ogwe aka na-enye ihe ọhụụ 7 nanometer ọhụrụ naanị maka smartphones dị elu
Fallout 76: New Fallouth Na-ewebata Bethesda
Fortnite maka mgba ọkụ nwere ike bụrụ eziokwu ma ọ bụrụ na ekwesiri ịdị ehihie a